Manchester United oo heli karta adeega xiddig muhiim ah ee ka tirsan kooxda Juventus – Gool FM
Dajiye January 22, 2021
(Manchester) 22 Jan 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa heli karta adeega xiddig muhiim ah ee ka tirsan naadiga reer Talyaani ee Juventus.
Xiddiga kooxda Bayern Munich ee Douglas Costa ayaan helin waqti ku filan uu ugu ciyaaro naadiga Bavarian-ka xilli ciyaareedkan, sidaas darteed waxaa suurtogal ah inuu ka gato garoonka Allianz Arena.
Douglas Costa ayaa qaab amaah ahaan kaga soo biiray Bayern Munich kooxda reer Talyaani ee Juventus, laakiin tababare Hans-Dieter Flick ma uusan keenin kulamo badan sidii la filayay.
Sida laga soo xigtay wargeyska “The Sun” ee dalka England Juventus ayaa ka careysan in Douglas Costa uusan kulamo badan u ciyaarin kooxda Bayern Munich, waxayna ka walwalsan tahay inaysan awoodi doonin inay iibiso suuqa xagaaga.
Sidaas darteed kooxda Juventus waxay dooneysaa inay kansasho heshiiska amaahda ah uu Douglas Costa ku joogo Bayern Munich, kahor inta aan loo ogolaanin inuu isla heshiis kale oo amaah ah ugu biirin naadiga Manchester United.